အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်က အီးယူ၊ ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများအား သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင?? - Yangon Media Group
အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်က အီးယူ၊ ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများအား သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင??
ဝါရှင်တန်၊ မေ ၁ – ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကို နိုင်ငံများမှ သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ်သွင်း ကုန်များ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ တင် ပို့မှုကို သွင်းကုန်ခွန်များကောက်ခံမှုအား ရက်ပေါင်း ၃ဝ ကြာ ဆိုင်းငံ့ရန် အမေရိ ကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်က မတ် ၃ဝ ရက် တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ယခုအပတ်တွင် တရုတ် နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများလုပ် ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်နေချိန်၌ ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သည်ကို ရှောင်လွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့ကြား ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီ ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် ဆွေး နွေးပွဲများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် သံမဏိသွင်းကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်ကို ရီးယားနိုင်ငံနှင့် သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ သည်ဟု ထရန့်အစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။ အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား ကုန်သွယ် ရေးသဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်သုံး သပ်ခြင်းအကြောင်းကို အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားအရာရှိများသည် အစ ပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အာဂျင်တီး နား၊ သြစတြေးလျ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံတို့နှင့် သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ်တင်သွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတရားပိုင်းအရ သဘော တူညီချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကာ ထိုသဘောတူညီ ချက်သည် မကြာမီတွင် အတည်ဖြစ်လာ မည်ဖြစ်သည်။
ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု အား လုံးတွင် သွင်းကုန်များကိုကန့်သတ်ပြီး သွင်း ကုန်များပို့ဆောင်ခြင်းကို တားဆီးကာ အမျိုး သား လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်သည့် ကိုတာ ခေါ် သွင်းကုန်ကန့်သတ်ချက်များ ထားရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ပူတင်နှင့် မက်ခရွန် အီရန်နျူကလီးယားစာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပြောကြား
တစ်ရက်လုပ်ခ ကျပ် ၅၆ဝဝ သတ်မှတ်ပေးရေး ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်သို့ အလုပ်သ
လေဗာကူဆင်အသင်းကို အာဆင်နယ်ဂိုးသမားပီတာဆက်ခ်ျ ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန် ၊ မိမိတို့မှာ တမင်ကျီစယ်ြ?
ကိုလိုနီ အကျဉ်းစခန်းမှ မျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင် Man of Will ရုပ်ရှင်
လက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့သော်လည်း ခံစားချက်ရောထွေးနေခဲ့ဟု ဘရာဗို ဆို